Nethy House Cafe & namagumbi-Igumbi 5
Eli gumbi liyakwazi ukuhlalisa abantu abadala aba-2 kwibhedi yeKing Size. Inegumbi leshawari eline-ensuite kunye nokusetyenziswa kwekhitshi elidityanelweyo, ekwabelwana ngalo nezinye iindwendwe. Isidlo sakusasa sinokuodolwa ngeendleko ezongezelelweyo kwaye siya kuhanjiswa kwi-cafe okanye ungazilungiselela ngokwakho. Izidlo zasemini ezipakishiweyo zinokuodolwa phambi kwentsimbi yesi-8pm kusuku olulandelayo.
I-Nethy House cafe & namagumbi sisakhiwo esitsha esihlaziyiweyo kwaye sihonjiswe ngendlela yale mihla/yakudala. Le cafe idweliswe kuluhlu lweeMbasa zeScottish Cafe phantsi kwenqanaba loMntu oMtsha oBalaseleyo. Amagumbi axhotyiswe kakuhle kwaye abanzi kwaye, ngaphandle kokubhaka ekhaya, iti, ikofu kunye nobisi siyakwazi ukubonelela ngezinto ezibalulekileyo zokuhamba onokuthi uzilibele.
I-Nethy Bridge yilali ethandekayo yasemaphandleni enezihambo ezintle zasekhaya, ukukhwela ibhayisekile kunye nololiwe i-Stathspey Steam umgama oziikhilomitha ukusuka kwisikhululo saseBroomhill. I-Nethy House isendleleni ye-Speyside Way walk kunye neGrantown e-Spey, iikhilomitha ezi-6 kude ngemoto, inokufikelelwa ngeenyawo kwindlela elula kwiiyure ze-1.5. Ilali inevenkile eluncedo kunye neebhula ezintle kunye nomthengisi wokutya okutofotofo (Ivenkile yaseFama yaseBalliefurth) ecaleni kwayo. I-Nethybridge lisango eliya kwindawo yeLecht kunye neCairngorm ski kunye nonxweme kunye ne-Inverness yimizuzu engama-45 nje yokuqhuba.
UKaren noBarry bahlala kwisiza kwaye baya kufumaneka ngokobuqu okanye ngefowuni xa uhlala.